Ngomlinganiselo oqhelekileyo, "i-distillation" kuthetha ukuhlambulula into. Umzekelo, omnye unokuyiphucula into ephambili ebaleni. Kwi-chemistry, i-distillation ibhekisela kwindlela ethile yokuhlambulula utywala:
I-distillation yindlela yokutshisa i- liquid ukuze yenze umphunga oqokelelwe xa sele sele ucolile uhlulwe kwi-original liquide. Isekelwe kwiindawo ezahlukeneyo zokubilisa okanye ukunyaniseka kwamanqaku.
Iprogram ingasetyenziselwa ukwahlula izixhobo zomxube okanye ukunceda ekuhlambulukeni.
Izixhobo ezisetyenziselwa i-distillation zingabizwa ngokuthi zixhobo zokuphunga izixhobo okanye zikhoyo . Isakhiwo esilungiselelwe ukuhlalisa enye okanye ngaphezulu i-stills kuthiwa yi- distillery .
Amanzi acocekileyo anokwahlukana ngamanzi anetyuwa kwi-distillation . Amanzi esetyuwa abilisiwe ukuze enze ifom, kodwa ityuwa ihlala isisombululo. I-steam iqokelelwa kwaye ivumelekile ukuba ipholile emanzini angenawo ityuwa. Ityuwa ihlala kwisitya sokuqala.
Ukusetyenziswa kwezixhobo zokuphunga izixhobo
I-distillation inezicelo ezininzi:
Isetyenziselwa ekhemistri ukwahlula nokuhlambulula utywala.
I-distillation isetyenziselwa ukwenza utywala , iviniga kunye namanzi ahlanjululwe.
Enye yezona ndlela endala zokuguqula amanzi. Amanzi acwecwe abuyele kwi-200 AD, xa ichazwe ngumfilosofi wamaGrike u-Alexander wase-Aphrodisias.
I-distillation isetyenziswe kwizinga lemveliso ukucoca iikhemikhali.
Icandelo lokushisa i-fossil lisebenzisa i-distillation ukwahlula iinqununu zeoli engcolileyo ukwenzela i-chemicalstock and fuel fuel.
Iintlobo zezidibanti zentambo ziquka:
Isiqwenga seZitshulu-mveliso - Umxube wezinto ezimbini ezinokutshatyalaliswa kuya kutshiswa de kube ziphephe. Umphunga uya kuba nexinzelelo ephezulu yecandelo elincinci, ngoko ke kuya kukhankanywa kwaye kususwe kwinkqubo.
Oku kutshintsha umyinge wezakhi kumxube obilayo, ukuphakamisa indawo yayo yokubilisa. Ukuba kukho umda omkhulu kwixinzelelo lomphunga phakathi kwamacandelo amabini, umbane ophekiweyo uya kuphakama kwinqanaba elincincileyo, ngelixa i-distillate iya kuba yinkalo engathandekiyo.
Isiqwenga sokutshatyalaliswa kweziqhekeza sihlobo oluqhelekileyo lwezixhobo zokuphunga izixhobo ezisetyenzisiweyo kwibhubhoratri.
I-distillation eqhubekayo - i-distillation iyaqhubeka, kunye ne-liquid entsha inondliwe kwinkqubo kwaye ihlukaniswe iziqhezu eziqhubekayo zisuswe. Ngenxa yokuba izinto ezintsha zinegalelo, ukugxilwa kwamacandelo akufanele kutshintshe njengokuba kubhekile izixhobo zokuhlaziya.
I-Distillation elula - Kwi-distillation elula, umphunga ungena kwi-condenser, cools, kwaye iqokelelwa. Umbane obangelwayo unomlinganiselo ofana nalowo owenziwe ngumphunga, oko kutshabalalisa okulula kusetyenziswe xa izixhobo zihluke kakhulu kumaphunga abilayo okanye zihluke ngokungafaniyo kwizinto ezingenakuzenzekelayo.
I-distillation ye-Fractional Distillation - zombini i-batch kunye ne-distillation eqhubekayo inokubandakanya i- fractional distillation , equka ukusetyenziswa kwekholeji engxenyeni ngaphezu kwebhola lokuphuza izixhobo. Ikholamu inika indawo engaphezulu, ukuvumela ukulungelelaniswa okugqithiseleyo komphunga kunye nokuhlukana okuphuculweyo.
Ikholam yeqhekeza ingasetyenzwa ukuba ifake iissysystem kunye nexabiso elithile le-liquid-vapor equilibrium.
I-Steam Distillation - Kwi- steam distillation , amanzi adibaniswa kwi-flask ye-distilling. Oku kunciphisa indawo yokubilisa yamacandelo ukuze bakwazi ukwahlukana kwisebusithi engezantsi kwinqanaba lokubola.
Ezinye iintlobo zezixhobo zokuphunga izitya zibandakanya i-distillation ye-vacuum, i-distillation emfutshane, i-distillation ye-distillation, i-pervaporation, i-distillation, i-distilation, i-distilation, i-distillation kunye ne-distillation,
Lone Pair Inkcazo
I-Electron Ubumbano Inkcazo
Mnu & Nks. Iyer: Uthando Phakathi Kwezobugwenxa
Uqeqesho lweZakhiwo zoLwaphulo lweZakhiwo - Ukwakhiwa kweZakhiwo zeZakhiwo kwiNkqubo yoKwahlula kwakho ukusebenza